काजिलियन अपहरणको पहिलो दस्तावेज
सिन्डे रे आठ महिना गर्भवती हुँदा उनी एक अपहरणकारी स्त्रीले अपहरण गरी हत्या गरेकी थिईन् जसले बच्चालाई चाहिँ खर्च गर्थे।
डार्गी पियर्सले गर्भवती हुने बारेमा आफ्नो पति र साथीहरूलाई झूट बोलाए। उनले आफ्नो कपडा हरेक महिनाको एकैछिनमा भर्ती गर्थे त्यसैले उनी गर्भवती देखिनन्। तर महिनाको अन्त्यमा, पियर्स उनको बच्चा किन भएन किनकि बहानाबाट बाहिर निस्किरहेको थियो। उनको गर्भावस्थालाई डरलाग्दो थियो उनको पति र उनको विवाहको कारण प्रमुख धारण थियो, 19वर्षीया पियर्सले बच्चा जन्माउने योजना बनाए।
पियर्सले सेरेरेन अपरेसनको बारेमा पुस्तकहरू पढे। उनले प्रक्रिया प्रदर्शन गर्न उनले आवश्यक उपकरणहरू किन्नुभयो। र अन्तमा, उनले महिलालाई बच्चा प्रदान गर्थे।
23 जुलाई, 1987 मा नकली बन्दूकलाई ब्रान्डिङ गर्दै, पियर्सले न्यू मेक्सिको, अल्बुकर्कमा क्रर्कल्याण्ड एयर फोर्स बेसमा एक क्लिनिकको पार्किंगबाट आठ महिना गर्भवती सिंडी लिन रे को अपहरण गर्यो। रेनिकले क्लिनिक भित्रको पूर्व प्राविधिक परीक्षाको पछाडि उनको कारमा फर्काइयो।
पियर्सले दुई घरलाई आफ्नो घर जहाँ जहाँ सेरेनरी संचालन गर्न थाल्छ र रे रे किशोरीलाई चोरीमा राख्यो, तर जब त्यो घर नजिकै पुग्यो, तिनले हेर्नु भएको थियो कि उनको पति घर थियो। त्यसपछि उनी म्यान्ज़ानो पर्वतमा एक अलग क्षेत्रमा पुगे।
त्यहाँ उनले भ्रूण मनिटरको कर्डसँग रे अजीब गरे जुन रेको पर्समा थियो। त्यसपछि उनले उसलाई झाडको पछाडि घुमाए र उनको पेटमा कार की कुर्सीमा फ्याँकिइन् जब सम्म त्यो नजिकको छेउमा पुग्न सकेन।
उनी न्युजिक कर्ड मार्फत बिग्रियो, बच्चालाई उनको अर्ध-सचेत आमाबाट बिग्रियो, त्यसपछि उसले उनीहरूलाई मृत्युमा खाइयो।
घरको बाटोमा पियस कार कारमा रोकियो र फोन प्रयोग गर्न सोध्नुभयो। रगतले भरिएको, उनले कर्मचारीहरूलाई बताए कि उनी त्यहाँ र सांता फेभ बीचको राजमार्गको छेउमा बसोबास गर्थे।
एम्बुलेंस भनिन्छ, र पियर्स र बच्चा अस्पतालमा लिएका थिए।
सहभागी चिकित्सकहरू पियर्सको कथाको संदिग्ध भएमा उनीहरूले जाँच गरेनन्। उनको अगाडी थिच्दै, पियर्सले उनको कथा परिवर्तन गरे। उनले उनीहरूलाई बताए कि एक अपमानजनक आमाले बच्चालाई जन्म दिएका थिए साता फे मा एक डाइविंगको सहायता संग।
अधिकारिहरु लाई बुलाया थियो, र पियर्स को हिरासत मा लिया गएको थियो।
सत्यले अन्तमा बोल्दछ
रिपोर्टहरू सतहमा उभिएको गर्भवती महिला अनुपस्थित थियो कि सतहमा सर्फ गरिएको छ। प्रहरी निरीक्षणको दबाब अनुसार, पियर्सले के गरे गरेको थियो। उनले पत्ता लगाएका थिए कि उनले रेलाई छोडेका थिए, तर यो धेरै ढिलो भयो। 23 वर्षीया सिंडी लिन रे मृत्यु भएको थियो।
पियर्स दोषी-फेला परेका थिए- तर मानसिक रूपमा बीमारको प्रथम-डिग्री हत्या, अपहरण र बाल दुर्व्यवहार र कम्तिमा 30 वर्षको जेलमा सजाय गरिएको थियो।
1 997- पियर्स को एक पुनरावृत्ति खोज्छ
अप्रिल 1 99 1 पियर्सको नयाँ अभ्यर्थीले आधारमा नयाँ परीक्षण प्राप्त गर्न खोजे कि उनको पछिल्लो वकीलले जानकारी पाउने असफल भए जुन पियर्स पागल थियो भनी प्रमाणित गरे।
यदि उनी दोषीको सट्टा पागल भएकी थिइन् - तर मानसिक रूपमा बिरामी उनी एक संस्थामा राखेका थिए जबसम्म न्यायाधीशले निर्धारित गरेन कि उनीहरु पर्याप्त रिहाई गर्न पर्याप्त थियो।
उनको आक्रोश को उलटने को बोली अस्वीकार गरियो।
द हङकङ युगल क्रला होमोल्का र पल बर्नेरोको अपराध
कलर Cop Antoinette फ्रैंक को अपराध
बालबालिकाको अपराध एन्जेला म्याकनिक्स
21 संयुक्त राज्यबाट नोबल शान्ति पुरस्कार विजेता
फ्रेडरिक द ग्रेट, प्रिशिया मा राजा को जीवनी
बौवा ग्रह ग्रह हो अन्वेषण गर्नुहोस्
कहाँ भाषण देखाउने होस्ट हाई स्कूलमा पुग्यो
तीन प्वाइन्ट परिप्रेक्ष्य बनाइएको सरल
एगुले प्रेस्टनलाई ANTM बाट बेवास्ता गरियो
मलाला यूसुफज्यू: नोबेल शांति पुरस्कार को युवातम विजेता
पीजीए टूर मा होंडा क्लासिक टूर्नामेंट
वर्षामा कसरी वृद्धि हुन्छ र यो आनन्द लिनुहोस्
स्केटबोर्ड क्वार्टर पाइप रैंप कसरी निर्माण गर्ने
मंगल मिथुन - मार्स साइन्स
के यो एक प्रार्थना म्यानिस को हत्या गर्न अवैध छ?
किन तपाइँ आफ्नो शीतकालीन पहिएहरु लाई डाउनसाइज गर्नु पर्छ
माथिल्लो आयोवा विश्वविद्यालय प्रवेश
Cuál es la diferencia entre un HMO y un PPO y cuél es
लेख्नको लागि कारण निबन्ध विषयहरूको सूची
फ्रेन्च महिलाहरु को अल्पाइन स्की रेसिङ टीम
तपाईं मजाको लागि के गर्नुहुन्छ?
इतिहासको हैकी Sack
सन्याङम उपनाम र उत्पत्ति
कोस्ट गार्ड एकेडेमी जीपीए, एसट र एक्ट डाटा
कसरी कन्जर्वरेटिभहरूले शिक्षा सुधार गर्नेछ?